Oromiyaa (kan yoo Ingiliffa keessatti yeroo tokko tokko Oromia jedhame kan barreeffamu, garuu barreeffama Afaan Oromoo keessatti Oromiyaa jedhamee beekama) kun immoo kutaalee Itoophiyaa kurnan keessaa tokko taate dha. Ballinaa lafa bahaa hanga kibba-dhihaa biyya keessatti 353,632 km² ta'ee qabatee, baayyinaa ummataa bara 2002 tilmamee hanga miliyoona digdamii-afurii qabdi, kunis ballina lafaa fi baay'ina ummataan biyyaa keessaa tokkofaa ishee tasisaa. Isheenis kan ofii keessa qabduu: kutaa Arsii, Baalee, Harargee, Iluu Abbaa Booraa, Kafaa, Shawaa, Sidaamoo fi Wallagga of keessaa qabdi, Booranaa fi Gujiin Sidaamoo jalatti walitti qabama turan. Magaalaan guddoon Oromiyaa durii Finfinnee yoo taatu, kan ammaa garuu Adaamaadha. Bara booda gaaffii mirgaa sabni Oromoo gaafateen booda gara Finfinneetti deebbite. Magaallan gugguddoon biraa Oromiyaa keessatti argaman Adaamaa, Amboo, Asallaa, Bishooftuu, Dambidoolloo, Fiichee, Gimbii, Gobbaa, magaalaa Jimmaa, Mattuu, Nagallee Booranaa, Naqamtee, Shaashamannee fi Walisoo dha.
"https://om.wikipedia.org/w/index.php?title=Poortaalii:Oromiya&oldid=36841" irraa kan fudhatame
Fuulli kun dhumarratti kan gulaalame guyyaa 20 Caamsaa 2021, sa'aa 06:42 irratti.